China Enwere Ike ịgbanwu ọkụ China Manufacturers & Suppliers & Factory
Enwere Ike ịgbanwu ọkụ - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Enwere Ike ịgbanwu ọkụ)
150W Na-aga n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè na-ekpuchi ọkụ
Nkwakọ ngwaahịa: 1pcs / CTN ma ọ bụ 4pcs / CTN
Bbier Led Parking Garage Lights 150Watt 5700k ìhè na-acha ọcha na-eji SMD3030 Uhie ibe, 19,500LM. Nke a 150W Light eletrik kanopi bụ ike dochie 400W HPS / zoro bọlbụ. Egwuregwu anyị dị 150 Watt Led Light Fixtures na- arụ ọrụ nke ọma maka iji obibi na azụmahịa mee ihe n'etiti 120v na 277v. Ụlọ a na-atụnye aluminum...
Ejiri Ido Uhie Na-eme Ka E Nweta Gas Gas 150w
Ike Igwe Anyị 150w bụ IP65, nke a kwadebere maka ebe gas na ọdụ ụgbọ oloko. Nke a na- awụpụ ụgbọ oloko 150w dị mma maka nkwụsịtụ ma ọ bụ n'elu ebe echichi. Ihe mkpuchi na ìhè nwere 60W, 100W, 130W na 150W ike dị iche iche maka nhọrọ. Ike Igwe Mmiri anyị na- enwu ọkụ na-emepụta Gas Station 150w bụ slim design slim...
Led Canopy Light Fixtures Retrofit Kit 150W
Onyinye anyị na-ekpuchi ekpuchi bụ IP65, nke a kwadebere maka ebe gas na ọdụ ụgbọ oloko. Nke a nwere ike ịgbanwu ọkụ ọkụ 150w dị mma maka nkwụsịtụ ma ọ bụ n'elu ebe echichi. Echiche ọkụ ndị ahụ nwere ike inwe 60W, 100W, 130W na 150W ike dị iche iche maka nhọrọ. Ngwá Ngwá Agha Anyị 150w bụ slim design slim na-achọ,...
Enwere ike ịgbanwu ọkụ ọkụ 50W
Ngwá Agha Ngwá Agha Anyị 50w bụ IP65, nke a kwadebere maka ebe gas na ọdụ ụgbọ oloko. Nke a na- enwu ọkụ ọkụ ọkụ dị mma maka nkwụsịtụ ma ọ bụ n'elu ebe echichi. Igwe ọkụ na-acha ọkụ na-acha ọkụ nwere 60W, 100W, 130W na 150W ike dị iche iche maka nhọrọ. Anyị na- ejikọta ọkụ ọkụ bụ slim design slim na-achọ, dị mfe...
25W Anyanwụ Post Top ọkụ 3750lm
25W Anyanwụ Post Top ọkụ 3750lm N’oge mgbede, ọwa anyanwụ nke 25W ga-agbanye n’elu ma gbanye ọkụ na-acha ọcha site na iko mmiri ozuzo na nchapụta 140 lumens na ụgwọ zuru oke nke anyanwụ. Nke a 25W post top butere ga-agbanye na akpaghị aka ozugbo anyanwụ dara wee ga-apụ mgbe anyanwụ wara. Ọ bụrụ na ogwe anaghị enweta...
butere post elu anyanwụ ọkụ 25W
butere post elu anyanwụ ọkụ 25W N’oge mgbede, ọkụ a na-agbanye n’eluigwe ga-agbanye n’onwe ya na-enwu ma na-enwu n’acha ọcha na-acha ọcha site na iko mmiri ozuzo na nchapụta 140 lumens na ụgwọ zuru oke nke anyanwụ. Nke a dugara Solar Post ebe ìhè ga-atụgharị na-akpaghị aka mgbe anyanwụ na-aga ala na uche anya mgbe...
Nyocha nyocha ọkụ ọkụ 50W 240V 5000K
Ezigbo Ogige Ugbo 50w nkwado na-akwụkwụ poodu kwesiri ekwesi 2 3/8-inch OD tenon & 3 inch. Na mgbakwunye, Ntugharị Ọhịa a na-akwado ntinye ọkụ dị na AC100-277V dị ugbu a, ma e jiri ya na 200W metal halide light bulbs, chekwaa ihe ruru 90% nke ụgwọ ọkụ eletrik. Igwe Ọkụ 240v a jiri mkpuchi mmiri IP65 mee ihe maka...
Nchọta ọkụ ọgbụgba ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ osisi 30W
Ogwe osisi ọgbụgba ọkụ 30w Amazon na- akwụ ụgwọ ntanetị na ntanetị dabara na 3 3/8-inch inch OD tenon & 3 inch osisi. Na mgbakwunye, Ogwe Ubi a Ogige na-akwado ntinye ọkụ ọkụ nke AC100-277V dị ugbu a, ma e jiri ya na 100W metal halide light bulbs, chekwaa 90% nke ụgwọ ọkụ eletrik. Ihe ndozi ndozi Ubi a jiri IP65...
Nnukwu ọkụ ọkụ ntụpọ 500w 130lm / w
Nsonaazụ a dị elu nke nnukwu ọkụ ntụpọ 500w 130lm / w nwere ọnụọgụ nke 65,000lumens. Nnukwu ike 500w 130lm / w LED spotlight dị mma maka ịmịcha nnukwu ama egwuregwu, ebe a na-egwu egwuregwu na ụlọ egwuregwu dịka ụlọ ikpe bọọlụ basketball, ụlọ tennis na ebe egwuregwu bọọlụ. Nnukwu ọkụ ọkụ a nke nnukwu LED 500 500m /...
Enwere Ike ịgbanwu ọkụ Enwere ike ịgbanwu ọkụ Enwere ike ịgbanwu ọkụ 150w Enwere ike ịgbanwụrụ ọkụ Ebube nwere ike ịgbanwu ọkụ 150w Enwere ike ịgbanwu Enwere ike ịgbanwu ọkụ ọkụ 150w Enwere ike ịgbanwu 100W